Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » COVID-19 Dil Ismiidaamin ah oo Looga Hortagay Hooyo iyo Wiilkeeda
Caafimaadka Warka • News • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
COVID-19 dilkii ismiidaamiska ahaa ee la horjoogsaday - sawir waxaa iska leh Pattaya Mail
Magaalada Pattaya, Thailand, suurtagalnimada in la dilo COVID-19 oo ismiidaamin ah ayaa laga hor istaagay markii haweeney laga hor istaagay inay is disho iyo wiilkeeda yar sababo la xiriira xaaladdooda quusta ah ee uu sababay COVID-19.
Haweeney 35-jir ah ayaa lagu sheegay Dao, dhalasho Laotian ah, oo la ilmeyneysay wiilkeeda oo 7-sano jir ah banaanka Tuanthong ee Pong Subdistrict inay fuliso dil COVID-19.
Koox haween ah ayaa arkay iyaga oo labadoodaba ooyaya, Dao-na waxay u sheegtay in ay ku wajahan tahay Keydka Mabprachan si ay u liqdo labadoodaba.
Waxay tilmaamtay qorshe kale oo ay ku horgeyso gaari 18-wheeler ah oo saaran mootooyinkooda.
Dao ninkeeda 51 jirka ah, Krit Banjong, wuxuu u shaqeynayaa sidii waardiye, hase yeeshe, waxay ku waysay shaqadeedii mowjadda saddexaad ee COVID-19 sababo la xiriira shaqada. Waxay sheegtay inaysan haysan lacag ku filan oo ay ku bixiyaan kirada ama inay iibsadaan cunto ama biyo ay cabaan.
Ugaaska tuulada Pong Moo 4, Ekachai Eimreung, ayaa timid goobta iyadoo ku taal Soi Mabprachan Lang 3 si ay u siiso cunno iyo 500 baht si ay u sii maraan habeenki iyadoo la balanqaadeysa inay kala hadasho milkiilaheeda inay si ku meelgaar ah u joojiso bixinta kirada qoyska. Mulkiiluhu wuxuu ogolaaday inuu u oggolaado inay dib u dhigaan kirada waqtigan.
Mid ka mid ah haweenkii ka mid ahaa kooxdii aragtay iyada oo ooyaysa ayaa timid guriga qoyskeeda iyada oo la socota asxaabteeda waxayna u soo bandhigtay Dao raashin, baahiyo, iyo lacag kaash ah oo u ballanqaaday inaysan mar dambe isku dayi doonin inay waxyeello u geysato nafteeda ama wiilkeeda.